Ianaro ny fomba hampanginana ny vava ao amin'i Google Chrome ho an'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ianaro ny fomba hampanginana ny vava ao amin'ny Google Chrome ho an'ny Mac
Javier Porcar | | Tutorials, maro
Taloha lasa izay, nisy ny ady teo amin'ireo mpizahatany samihafa misy eny an-tsena. Rehefa nanadihady fampianarana fampitahana teo amin'ny mpitety anay izahay, ny masontsivana toy ny hafainganan'ny pejy, ny lanjan'ny fampiharana na ny fanjifana loharano dia refesina. Amin'izao fotoana izao dia toa niala sasatra ny mpandrindra tamin'ny fanatsarana bebe kokoa ny browser na ny fetra farany azo.
Anisan'ireo malaza indrindra, mahita Safari sy Chrome isika, samy manana ny fahasamihafana sy ny fitoviana. Isan'ny vaovao farany hitantsika fa mety hampanginana ny kiheba. Safari dia manana ny safidy avy amin'ny Mac OS X Capitan, mampiditra fanamafisam-peo eo ankavanan'ny baran'ny adiresy, ary manindry azy io dia mampanginina ity tabilao ity isika. SAINGY Manana izany safidy izany ve i Google Chrome? Eny misy izany, saingy afenina miafina izy io.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia tadiavo ny kiheba. Raha manokatra pejy izay antenaintsika hahita horonantsary na horonam-peo isika dia tsy hisy ny olana. Saingy indraindray isika dia eo amin'ny pejy misy horonan-tsary izay eo amin'ny farany ambany ary mandeha ho azy. Araka ny tsy ampoizintsika dia mety tsy fantatsika ny pejy tokony hangina. Mora ny mahita azy. Hiseho eo ankavanan'ny kiheba izay mamoaka feo ny mariky ny mpandahateny.
Raha vao hita, ny fampanginana azy dia tsotra toy ny fipihana eo amin'ny kiheba miaraka amin'ny bokotra ankavanana. Amin'izay fotoana izay dia tokony hiseho ny menio misy safidy maromaro, dia tadiavinay ilay safidy tabilao moana. Tsindrio izany dia izay ihany. Mora ny manamarina fa manana ny safidy voamarika isika, satria toa izany koa no miseho amintsika mpandahateny amin'ny tsipika fitifirana, hanondroana fa nofoanana izy io. Amin'izany fomba izany no hanafoanana io kiheba io, fa afaka manohy mihaino ny sisa amin'ireo kiheba isika.
Aorian'izay, mety ho tonga ny fotoana hihainoana ilay audio avy amin'ilay kiheba efa namboarina teo aloha. Amin'izay dia tsy maintsy manao io asa io ihany ianao, fa izao kosa dia mifidy: alefaso ny feo kiheba.
Ity safidy ity dia misy farafaharatsiny ao amin'ny kinova 55.0.2883.95, izay iray izay napetrako ao amin'ny Mac-ko ankehitriny. Raha tsy hita izany, fanavaozana ny kinova farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ianaro ny fomba hampanginana ny vava ao amin'ny Google Chrome ho an'ny Mac
Efa "tsy nanaja ny vahoaka Irlande" ve i Tim Cook?
SecondSouth dia mandefa ny fehin-tànana voalohany mitafy ny Apple Watch, ny ActionSleeve